Caruurta kayar 18 sano – Asylum – JRS Romania
Qaybtan waxaa loogu talagalay dadka ka yar 18 sano jir oo ku yimid Romania waalidkood la’aan.
Haddii aad ka yartahay 18 sano jir, maamulka ayaa kuu tixgelin doona inaad tahay ilmo ama qof yar. Haddii waalidiintaada aysan kula joogin, waxaa laguu tixgelinayaa cunug aan la wehelin ama ilmo yar oo aan lala socon..
Fadlan sheeg runta oo ku saabsan da’daada, sida carruurta iyo dhallinta aan qaan gaarin loola dhaqmo si ka duwan kan dadka waaweyn.
Sideen u dalban karaa magangalyo?
Haddii aad ka baqeyso waxa ka dhacay waddankaaga hooyo, ama waxa dhici kara haddii aad soo laabato, waxaad xaq u leedahay inaad waydisato weydiisato “magangelyo” ama “ilaalin” Roomaaniya. Tan waxaa la yiraahdaa “magangalyo doon”. Xaq ayaad u leedahay xitaa haddii aad ku soo gashay Romania si aan caadi ahayn, micnaheeda adiga oo aan haysan dukumenti sax ah. Waad dalban kartaa magangalyo hadaad joogtid xuduuda ama aad horey u joogtid xuduuda. U sheeg Saraakiisha Bilayska Xudduud ama saraakiisha booliiska ee caadiga ah inaad ka baqeyso inaad ku laabato wadankaagi oo aad weydiisato “magangalyo” ama “ilaalin”.
Waxaa laguu tixgelin doonaa inaad tahay “magangalyo-doon” laga bilaabo waqtiga aad magangelyo ku codsatid qoraal ama hadal. Markaad magangalyo ka dalbato Romania, waad joogi kartaa halkan ilaa inta maamulku go’aan ka gaarayo kiiskaaga. Maamulka Roomaania ee loo yaqaan Kormeeraha Guud ee Socdaalka (waad maqli kartaa dadka kale oo ugu yeera “IGI” ama “Xafiiska Socdaalka”) ayaa mas’uul ka ah go’aaminta dalabkaaga magangalyo, taasoo la micno ah haddii aad hesho badbaadin ama aadan helin.
Maxaa dhacaya kadib markaan codsado magangalyo?
Markaad codsatid magangalyo, waxaa lagu geyn doonaa meel aamin ah. Markii hore tani waxay noqon doontaa Xarun Gobol oo ay maamusho Kormeerka Guud ee Socdaalka. Waxaad maqli kartaa dad kale oo ku tilmaamaya “xero” ama “xarunta soo-dhowaynta”. Markaad halkan timaadid, waa inaad isdiiwaangelisaa oo waxaad heli doontaa dukumenti aqoonsi oo ku meelgaar ah. Haddii aad ka yartahay 16 sano, waa inaad caadi ahaan hoy lagu dejiyaa xarun gaar ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinta aan qaangaarka ahayn, halkaas oo ay ku jiraan dad la shaqeyn jiray carruurta. Haddii kale waad joogi kartaa Xarunta Gobolka.
DIIWAAN GELIN halka aad joogi karto ka dib markii aad magangalyo weydiisatay
Waa maxay xuquuqdeyda ilmo ahaan?
Caruurimo ahaan waxaad leedahay xuquuq gaar ah, sida tagida iskuulka iyo fasalada luqada Romania, ama helista daryeel caafimaad oo munaasib ah. Shaqaalaha Xarunta Gobolka iyo shaqsiyaadka u shaqeeya NGO-yada kala duwan ayaa iyaguna u diyaar ah inay caawiyaan. “NGO” (“ONG” oo kuyaal Roomaaniya) waa urur aan lala xiriirin dowladda. Riix HALKAN si aad u hesho faahfaahinta xiriirka ee NGO-yada kaa caawin kara. Ha ka baqin inaad weydiisato caawimaad ama macluumaad kasta. Waxkasta oo aad u sheegto waa sir.
Hoos ka dhag sii si aad u aragto inbadan oo ku saabsan xuquuqda guud iyo waajibaadka ay dhammaan magangalyo-dooneyaasha ku leeyihiin Romania.
XUQUUQAHA IYO WAAJIBAADKAWaxbadan oo ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka magangelyo-doone
Ayaa i caawin doona?
Haddii aad tahay cunug safraya waalidkii la’aantiis, waxaad caawimaad ka heli doontaa “wakiil sharci”, oo ay dowladdu kuu fidiso. Tani waxay sidoo kale dhici doontaa haddii aad la timaado xubno kale oo qoyska ka tirsan oo qaangaar ah, laakiin aan ahayn waaliddiin.
Wakiilka sharciga ayaa kaa caawin doona inta lagu gudajiro nidaamka magangalyada wuxuuna ku raaci doonaa marka aad lahadleyso masuuliyiinta. Ha ka baqin inaad kala hadasho asaga ama ayada dhibaatooyinkaaga iyo cabsidaada. Isaga ama iyada ayaa u joogaa inay hubiyaan in xuquuqahaaga nidaamka magangalyada la xushmeeyo iyo in baahidaada, amnigaaga, samaqabkaaga iyo aragtidaada la tixgelinayo.
Nidaamka magangalyada wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr tillaabo, iyo wakiilkaaga sharciga ah iyo NGO-yada ayaa kaa caawin doona inta hawshani socoto. Riix qaybaha xiga si aad uga aqriso talaabooyinkan.
Fadlan weydiiso talo iyo macluumaad sida ugu dhaqsaha badan. Eeg qaybta xiriirkeena wixii faahfaahin ah ee ku saabsan ururada ku caawin kara.
Mas’uuliyiinta ma weydiin karaan da’deyda?
Haddii maamulayaashu ka shakiyaan inaad tahay ilmo, dhakhtar ayaa ku baadhi kara si uu u ogaado da’daadu. Ha ka baqina haddii ay taasi dhacdo iyadoo cidina aaney wax yeeli doonin. Dhakhtarka ayaa qaadi doona cabiro qof si loo ogaado da’daada. Haddii aadan ku qanacsaneyn nidaamka, fadlan u sheeg wakiilkaaga sharciga. Haddii natiijooyinka ay sheegaan inaad ka weyn tahay 18 sano, waxaa laguula dhaqmi doonaa sida qof weyn.
Maxaa dhacaya haddii aan been ka sheego da’dayda dhabta ah?
Haddii aad ilmo tahay laakiin aad markii ugu horreysay caddeysay in aad ka weyn tahay 18 sano, weli waad u sheegi kartaa mas’uuliyiinta da’daada dhabta ah. Fadlan samee sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan, sida carruurta safraya waalid la’aantood waxaa loola dhaqmaa si ka duwan kan dadka waaweyn.
Tusaale ahaan, dadka waaweyn ee ku soo galay Romania si aan sharci ahayn (micnahooda iyada oo aan la haynin dukumiinti dacwo ah) oo go’aansaday inaysan dalban magangalyo waxaa lagu geyn karaa xarun xiran (oo loo yaqaan Xarunta Xannaanada Dadweynaha) si looga saaro Romania. Haddii aad isku aragtid xaalad noocaas ah waxaad booliiska u sheegi kartaa da’daada dhabta ah. Sidoo kale waad dalban kartaa magangalyo haddii aad ka baqeyso waxa ka dhacay wadankaaga hooyo, ama waxa dhici kara haddii aad soo laabato. Haddii aadan haysan dukumentiyo muujinaya da’daada dhabta ah, dhakhtar ayaa marka hore baari kara si uu u ogaado da’daada. Haddii natiijooyinka ay xaqiijinayaan inaad ilmo tahay, waad ka tagi doontaa xarunta xiran. Haddii natiijooyinka ay sheegaan inaad ka weyn tahay 18 sano, waxaa laguula dhaqmi doonaa sida qof weyn!
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah carruurta aan lala soconin xaashiyaha hoose (oo ay soo saareen Golaha Qaranka Roomaaniya ee Qaxootiga / CNRR):
Ilmaha aan lala wehelin ee ah buug yarayaasha loo yaqaan ‘PDF’ buugyaraha loogu talagalay carruurta aan lala wehelin ee doonaya magangalyada caalamiga ah ee Romania